Polyphemus sy Odysseus: fiaviana sy dikan'io angano io | Fitsangatsanganana tanteraka
"The Odyssey" dia tononkalo epic nosoratan'i Homer izay mitantara ny zava-niainan'i Odysseus (antsoina koa hoe Ulysses amin'ny fomban-drazana latinina), mpanjakan'i Ithaca, rehefa niverina nody rehefa avy nahavita ny Ady Trojan, ireo hetsika mifandraika amin'ny "The Iliad." Ny mpanoratra dia inoana fa namelabelatra tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK ary rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary ampahany tamin'ny fomban-drazana am-bava grika taloha izy ireo, ary notandreman'ny Rhapsodies avy amin'ny tanàna isan-tanàna.
Tany amin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK, ny governoran'i Athens, antsoina hoe Pisístraro, dia naniry ny hanangona ny tononkalon'i Homer ary nosoratana izy ireo. Amin'ireny, ny kinova tranainy indrindra amin'ny "The Odyssey" dia nanomboka tamin'ny taonjato faharoa talohan'i JK ary ny an'ny Aristarchus of Samothrace. Amin'ity lahatsoratra manaraka ity dia dinihinay ny adihevitra momba ny «The Odyssey», ny firafiny, ny lohahevitra ary indrindra ao ny angano an'i Polyphemus sy Odysseus.
1 Inona ilay atao hoe "The Odyssey"?
2 Ahoana no fomba fandrafetana ny «The Odyssey»?
3 Inona ny angano momba an'i Polyphemus sy Odysseus?
4 Iza ireo Polyphemus sy Odysseus?
5 Inona no dikan'ny angano momba an'i Polyphemus sy Odysseus?
6 Lohahevitry ny "The Odyssey"
Inona ilay atao hoe "The Odyssey"?
Mandritra ireo hira 24, Homer dia nitantara ny fiverenana tany Ithaca an'ilay maherifo grika Odysseus izay, rehefa tsy tao an-tranony nandritra ny folo taona, dia maharitra folo taona vao hiverina. Nandritra izany fotoana izany, ny vadiny Penelope sy ny zanany lahy Telemachus dia tsy maintsy mitondra any amin'ny lapan'izy ireo ireo mpitory izay maniry hanambady azy, satria mino fa maty Odysseus ary mandany ny fananan'ny fianakaviana rehetra.
Ny fitaovam-piadiana tsara indrindra an'i Odysseus handresena ireo vato misakana rehetra sendra azy nandritra ny fotoana niainany dia ny hafetseny. Misaotra azy sy ny fanampian'ilay andriamanibavy Pallas Athena, izy dia afaka niatrika ireo olana mitohy izay tsy maintsy hatrehiny amin'ny volon'ireo andriamanitra. Amin'izany fomba izany dia mandrafitra tetika sy kabary kabary isan-karazany ampiasainy izy hanatanterahana ny tanjony.
Ahoana no fomba fandrafetana ny «The Odyssey»?
Mizara telo ity tononkalo epiko ity: ny telemachy, ny fiverenana ary ny valifaty an'i Odysseus. Ny telemaquia dia mandrakotra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny fahefatra amin'ny "The Odyssey", izay nitantara ny fanapahan-kevitr'i Telémaco hiala hitady ny rainy. Ny fiverenan'i Odysseus dia misy ny canto fahadimy ambin'ny folo fahadimy izay nilazana ny zava-niainan'i Odysseus tamin'ny diany niverina tany Ithaca, raha ny ampahatelony kosa dia manondro ny valifaty nataon'i Odysseus sy ny fiarahan'ny fianakaviany nanomboka tamin'ny canto fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-XNUMX ambin'ny folo.
Inona ny angano momba an'i Polyphemus sy Odysseus?
Ao amin'ny canto fahasivy an'ny "The Odyssey" an'i Homer, dia nitantara ny zava-niainany izay nanjo azy sy ny namany nandritra ny telo taona ny mpihetsiketsika rehefa niomana ny hiverina hody izy ireo rehefa avy niady tamin'ny Ady Trojan.
Ao amin'ity hira ity, Odysseus dia manazava ny fomba nahatongavany tany Thrace, izay nisy ny Cícones. Novonoin'izy ireo tao ny mponina rehetra tao Ismaro afa-tsy i Marón, pretran'ny Apollo izay nanome azy roa ambin'ny folo fanaka feno divay ho mariky ny fankasitrahana. Rehefa avy niaritra ny fanafihan'ny Cycons i Odysseus dia nandao azy niaraka tamin'ny andian-dehilahy ary tonga tany amin'ny tanin'ireo mpihinana lotira. taorian'ny tafio-drivotra izay nampivily lalana azy ireo tamin'ny làlana mandra-pahatongany tany amin'ny nosy Cyclops.
Nidina izy ireo ary naka ny iray amin'ireo fitoeran-divay i Odysseus mba hanomezana azy. Rehefa tonga tao amin'ny zohy Cyclops Polyphemus izy ireo dia nanaiky ny haka ny zava-drehetra avy eo ireo naman'ny mpihetsiketsika, na dia tsy afa-po aza i Odysseus. Amin'izay fotoana izay, Nipoaka i Polyphemus niaraka tamin'ny andian'ondriny ary rehefa nahita azy ireo dia nanidy azy ireo ary nandany ny sasany tamin'izy ireo.
Mba hialana amin'ny fahafatesana dia mieritreritra ny hampiasa ny divay nomen'ny pretra Maron azy i Odysseus mba hahamamo azy. Nanaiky ny sambony i Polyphemus ary nanontany ny anarany, ary namaly i Odysseus fa nantsoina hoe "tsy misy olona na tsy misy". Rehefa natory mamo ny bisikileta dia nitondra hazo oliva ho eo amin'ny masony tokana izy mba hanajamba azy ary hitsoaka.
Avy hatrany dia nikiakiaka noho ny fanaintainana i Polyphemus mandra-pandrenesan'ny Cyclope hafa azy fa nino izy fa nosazin'i Zeus izy ary very saina satria nilaza tamin'izy ireo fa "Tsy nisy olona nandratra azy. Mba handosirana an'i Odysseus sy ny olony mifatotra amin'ny kibon'ny ondry. Koa satria tsy nahita i Polyphemus, dia tsy hitany izay niafenan'izy ireo ka afaka nitsoaka izy ireo.
Raha tany an-dranomasina izy ireo dia nihomehy an'i Polyphemus i Odysseus: "Tsy nisy nandratra anao afa-tsy Odysseus." Tsy fantatr'izy ireo fa ny bisikileta dia zanak'ilay andriamanitry ny ranomasina Poseidon ary rehefa nanozona azy ireo i Polyphemus dia nisy vato lehibe nianjera teo akaikin'ny sambon'izy ireo. Nangataka fanampiana tamin-drainy koa izy ary nangataka ny tsy hiverina any Ithaca intsony i Odysseus na raha mody izy dia tokony hiverina irery fa tsy ao anaty sambony. Ary dia izany tokoa, Poseidon dia niteraka olana be taminy teny amin'ny ranomasina tamin'ny fiverenany ary nitazona azy lavitra an'i Ithaca nandritra ny fotoana ela.
Iza ireo Polyphemus sy Odysseus?
Odysseus: Odysseus no tompon'andraikitra amin'ny tononkalo "The Odyssey" na dia hita koa ao amin'ny "The Iliad" nataon'i Homer. Izy dia iray tamin'ireo mahery fo malaza amin'ny angano grika ary tao amin'ny "The Odyssey" dia solontenan'ny mpanjaka Ithaca, iray amin'ireo nosy Ionia ankehitriny, miorina amoron'ny morontsiraka andrefan'i Gresy. Mampiavaka azy ny faharanitan-tsainy sy ny hafetseny. Raha ny marina dia nahazo ny hevitra fananganana ny Trojan Horse izy. Manambady an'i Penelope izy ary rain'i Telémaco.
Polyphemus: Io no malaza indrindra amin'ny Cyclops amin'ny angano grika. Zanakalahin'i Poseidon sy ilay nymph Toosa, matetika izy no aseho ho toy ny ogre volombava misy vaza goavambe ary sofina satyr manondro manana maso tokana amin'ny handriny.
Inona no dikan'ny angano momba an'i Polyphemus sy Odysseus?
Notsipihan'ny manam-pahaizana fa ny angano an'i Polyphemus sy Odysseus dia manondro ny ady amin'ny hafetsena amin'ny herisetra sy ny fandresen'ny antony noho ny hery.
Lohahevitry ny "The Odyssey"
Dia: Lohahevitra iraisana ao amin'ny literatiora tandrefana izay iatrehan'ilay maherifo ireo loza marobe izay nivoahany natanjaka sy nahavita nanatratra ny tanjony.
Fitiavana tsy misy fepetra: Hita taratra amin'ny tantaran'i Odysseus sy Penelope, izay naharesy ny sakana sy ny fakam-panahy apetraky ny fiainana amin'izy ireo ary tafaraka indray.
Ny fianakaviana: "The Odyssey" dia miresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fifandraisan'ny mpianakavy hanome lanja ny fiainantsika.
Trano sy firenena: Ny fanirian'i Odysseus dia ny hiverina any Ithaca, toerana nahaterahany ary toerana onenan'ny fianakaviany, izay tsy hitany hatramin'ny nialany tany amin'ny Trojan War.
Ny valifaty: Ity lohahevitra ity dia hita taratra amin'ny tantaran'i Penelope. Hitan'i Odysseus fa rehefa lasa izy dia misy mpangataka sasany te hanambady ny vadiny hisolo azy sy hifehy ny fananan'izy ireo, noho izany dia mamaly faty izy ireo amin'ny famonoana azy ireo.
Ny fahefan'ny andriamanitra: Ao amin'ny "The Odyssey" sy "The Iliad", dia eo am-pelatanan'andriamanitra ny anjaran'ny olombelona. Na i Pallas Athena na i Poseidon na i Zeus dia samy mitana andraikitra lehibe amin'ny fiainan'ireo mpilalao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Polyphemus sy Odysseus
Maninona no mandeha any Roma